Social Solutions for nonprofits specialists Global Giving Foundation Orphnage Social Brite Just Giving Foundation Give Menaning Foundation Razoo Foundation Gofundme Foundation webadvantage Better Place Online Volunteering UNV Benevola Foundation Given gain Network For Good Health Care volunteer Onepercent Club Nominettrust Ammado Foundation Charitynavigator foundation Respnewer Greatnonprofits foundation Mona Foundation Greatergood foundation Worldwide helpers Rande Foundation Fundrazr Foundation Givelogy foundation Webd vantage all site Compassion Donorschoose Kiva Foundation राष्टिय स्तरका लिकं : National link कान्तिपुर दैनीक नयाँ पत्रिका दैनिक नेपाल समाचारपत्र दैनिक अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक हिमाल खबर गोरखापत्र नागरीक न्युज डट कम डिसी नेपाल नेपाली कला साहित्य लोक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय यातायात ब्यबस्था बिभाग अनलाई खबर ईमकालु डट कम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् वेबलिकं मकालु डट कम जीवनी : Life Story
« Previous Next » Mar 16, 2012 भाषासाहित्यकार पारिजात पारिजातका भनाइमा "कञ्चनजङ्घाका चिसा सासहरूले म्वाइँ खाएको पहाड दार्जिलीङ हो ।" भारतको पश्चिमबङ्गालस्थित दार्जिलिङमा पारिजातको जन्म भएको थियो । त्यहीँको लिङ्गिया चियाकमानमा संवत् १९९४ (सन् १९३७) सालको वैशाखमा (अनुमानित) पारिजात सामान्य परिवारमा जन्मेकी थिइन् । अनि यिनको वास्तविक नाउँ विष्णुकुमारी वाइबा हो । साथै त्यतिखेर यिनलाई लामाले प्रदान गरेको नाउँ छेकुडोल्मा हो । वाइबाको अर्थ यी तामाङ थिइन् । आफ्नो थरका विषयमा उनले भनेकी पनि थिइन् "म तामाङ पनि पिछडिएको जातबाट आएकी हुँ ।"
विष्णुकुमारी वाइबाले आफ्नो चेतना आफैँ भित्र परिपक्व हुन थालेपछि आफ्ना बाबुआमा तथा लामाले राखिदिएको नाउँलाई फेरेर आफूलाई पारिजात बनाएकी थिइन् । पारिजातकै कुरा गर्ने हो भने यिनले आफू काठमाडौं आएपछि मात्र पारिजातको फूल देखेकी थिइन् । पारिजातको नाउँ राम्रो लागेर र पारिजात बोटबाट होइन झरेपछि भुइँ बाट टिपिन्छ भन्ने थाहा पाएर यिनले विष्णुकुमारी वाइबालाई पारिजातसँग साटेकी थिइन् । यसै विषयलाई लिएर यिनले फेरि पनि भनेकी थिइन्, "पारिजात नाउँका पछि रहेको ऐतिहासिक तथा पौराणिक अवधारणाबाट प्रभावित भएर राखेकी हुँ ।" यही पारिजातका नाउँबाट यिनको साहित्यिक व्यक्तित्व क्रमशःक्रमशः फैलिएर देशदेशान्तर पुग्यो । पारिजात यही नाउँबाट नेपाली भाषासाहित्यका संसारमा चिरञ्जीवी भइन् ।
पारिजातका बाबु दार्जिलिङनिवासी भए तापनि उनीहरूको पुख्र्यौली थलो सङ्खुवासभाको चैनपुरस्थित उँखुवा गाउँ थियो । पारिजातका बाजे सरदार धनमानसिंह वाइबा र्सवप्रथम भारतको दार्जिलिङ पुगेका थिए । वाइबा दार्जिलिङ पसेर चियाकमानमा कुल्ली भए । उनले त्यतै बिहे गरेर आफ्नो गृहस्थी पनि कायम गरे । अनि उनले छोरा कालुसिंह पाए ।
के.एस्. लामा (कालुसिंह लामा) अर्थात् पारिजातका बाबु पनि पहिला भारतीय सैनिक सेवामा कार्यरत थिए । त्यस कालमा पारिजातको घरमा आर्थिक पक्षले पनि राम्रो टेवा पाएको थियो । तर पारिजातका घरमा क्रमशः दसा पस्न थालेपछि उनीहरूको सम्पन्नता पनि बिस्तारै खच्किन थाल्यो, हराउन थाल्यो र डुब्न पनि थाल्यो । वास्तवमा त्यसपछि दार्जिलिङमा उनीहरूका लागि सुनको फुल पार्ने अर्को कुनै कुखुराको आविष्कार हुन सकेन । त्यसैले उनीहरूले त्यहाँ आयआर्जन गरी खास कुनै उन्नति गर्ने सपना पनि देख्न सकेनन् । त्यस बेला उनीहरूका जीवनमा जेजति कष्ट भए तापनि पारिजातका बाबु होमियोप्याथीका चिकित्सक थिए । तिनै चिकित्सकले दुक्खसुक्ख घरको दैनिक कारोबार धानेका थिए ।
पारिजातका बाबु कालुसिंह वाइबालाई डा. के.एस्. लामा भनेरै चिनिन्थ्यो । अनि उनकी आमाको नाउँ अमृता मोक्तान थियो । अमृताचाहिँ के.एस्. लामाकी दोस्री पत्नी थिइन् । प्रथम पत्नी दिवङ्गत भएपछि लामाले पुनः अर्को बिहे गरेका थिए । पारिजात भने लामा दम्पतिकी तेस्रो सन्तान थिइन् । पारिजातका दुवै आमाबाट चाहिँ जम्मा ११ जना सन्तान जन्मेका थिए ।
पारिजात बाल्यावस्थादेखि नै बिमारी परिरहन्थिन् । उनको शारीरिक दुर्बल ताले गर्दा स्कुलमा पनि साथीभाइहरूसँगको झैझगडा र खेलकुदमा उनी हार्ने गर्थिन् । वास्तवमा त्यसै बेला यिनलाई शरीर कुँजिने रोगले भित्रभित्रै आक्रमण गर्न थालेको रहेछ । पहिलोपल्ट त्यस रोगले आक्रमण गर्दा पारिजात १३ वर्षी थिइन् । त्यस बेला हाडजोर्नी दुख्ने रोगले पारिजातलाई निक्कै विहृवल बनाएको थियो । पारिजात जेजस्तो बिमारी हुँदा पनि उनका बाबुले आफै औषधिउपचार गर्थे । डा. के. एस्. लामा आफ्नै हठ, अडान र सिद्धान्तका चिकित्सक थिए । त्यसैले २०११ सालसम्म पारिजातले अरू चिकित्सकको मुख राम्ररी देख्न पाएकी थिइनन् । त्यस बेलासम्म उनका बाबुले आफू चिकित्सक भएको अहम् पारिजातमाथि नै थोपरिराखे । वास्तवमा सानैदेखि पारिजातले समुचित उपचार पाएको भए सायद उनी जीवनभरि ओछयानमा पल्टनुपर्ने थिएन भन्ने पनि त्यस समयका मान्छेहरूको गुनासो थियो ।
बिमारी परिरहने भए तापनि पारिजात सानैदेखि अन्तर्मुखी थिइन्, अनि यी भावुक पनि थिइन् । आफ्नो किशोरावस्थाका विषयमा पारिजातले भनेकी थिइन्( "मेरो गाउँ सहरदेखि टाढा थियो । मेरो घर जङ्गलबीचमा थियो । त्यस बेला सायद मेरो भित्री अचेतन मनबाटै लेखूँ लेखूँ लाग्यो होला; त्यसैले मलाई जङ्गलजङ्गल डुलूँ डुलूँ लाग्थ्यो, खोलाका डिलडिलमा गएर सुतूँ सुतूँ लाग्थ्यो र बाटाबाटामा गएर नाचूँ नाचूँ लाग्थ्यो । त्यति मात्र होइन, म त्यस बेला भीरपाखा ओरालोउकालो सबैतिर डुल्न पुग्थे“ । त्यतिखेर मलाई रमाइलो गर्न नै विशेष मन पथ्र्यो । तरै पनि त्यस बेलाचाहिँ मैले कविता लेख्न सकेकी थिइन“ ।"
लेखूँ लेखूँ , पढूँ पढूँ र गम्भीर बनूँ बनूँ लाग्ने बेलामा पारिजात घुम्नमा नै मन दिन्थिन्, जङ्गल पस्थिन्, ऐँ सेलुको झाङमा पसेर ऐँ सेलुका दाना टिपेर खाँ दै दिन बिताउँथिन्; पुतलीको विवाह गर्थिन्; झयाउँकिरी समातेर उडाउने गर्थिन् । अरूअरू साथी भेला पारेर जङ्गलका बीचमा पुग्ने गर्थिन् र खोलामा गएर नुहाउने गर्थिन् । वास्तवमा उनलाई खोला, पानी र वर्षा सानैदेखि मन पर्थे । यसबारे पारिजातले पछिसम्म पनि भनिरहिन् "म वर्षा मा हराउँछु , मेरो शरीरले दिने भए त मलाई पानीमा भिज्न रमाइलो लाग्छ । जब वर्षा सकिन्छ मलाई म आफू नै रित्तो भएझै“ लाग्छ । मेरो मन छटपटिन्छ र म तीव्र प्यासको अनुभूति गर्छु "
शिशु अवस्थामा नै पारिजातको भावना चराझै“ चारैतिर घुमिरहने गथ्र्यो । त्यसैले बाल्यकालदेखि नै यी डुलन्ते थिइन् । यी प्रायः एक्लै डुल्ने गर्थिन् । पानीमा भिज्दैभिज्दै डुल्नमा पनि यीभित्र आनन्द जम्ने गथ्र्यो । त्यसै बेलादेखि यिनलाई जूनले नुहाएको धर्तीमा समय बिताउन मन लाग्थ्यो । त्यो चञ्चले उमेरमा यिनलाई फूलबारीको एकान्तमा रात बिताउन मन लाग्थ्यो । साथै यिनलाई त्यस समयमा चौतारीमा पनि सुत्न मन लाग्थ्यो । तर जतिजति दिन बित्दै गए यिनका सोचाइहरू पनि अर्थहीन हुँदै गए । घाम अस्ताउनासाथ यिनले कैदी हुनुपथ्र्यो । मानौँ यिनको घर यिनको जेल हुन्थ्यो । जेलबाट फुत्किन यिनले कैयौ“ संघर्ष गर्नुपथ्र्यो । जेल फोर्न नसकेर यिनले आफ्ना अभिभावकहरूसँग मुखमुखै लाग्नुपथ्र्यो । विभिन्न वाध्यता, विवशता र परिस्थितिले हिर्काएर त्यस बेला यिनको सशक्त जाँगरलाई कैदी बनाइएको थियो । त्यो घडी यिनले आफ्ना मनका अविरल चाहनालाई बिर्को लाएर आफैभित्र आफैलाई कज्याउनु परेको थियो ।
पारिजात सानैदेखि घर र कोठा सजाउने काममा सिपालु थिइन् । यी राम्राराम्रा फूलहरू खोजेर ल्याउँथिन्, अनि कोठा सजाएर ढकमक्क पार्थिन् । यिनको यो रीत दार्जिलिङमा थियो र त्यही रीत काठमाडौंमा पनि कायमै थियो । यिनको आफ्ना घरमा रहेको लेख्ने टेबलमा राखिएको फूलदानमा पनि प्रायः ताजा फूलै राखिएको हुन्थ्यो । फूलप्रतिको यिनको चाहना देखेर पछिपछि पनि यिनका एक जना मित्र रूपचन्द्र विष्ट यिनलाई बारम्बार जिस्काउने गर्थे । अर्थात् विष्ट यिनलाई फूल टिपेर नहिँड्ने सल्लाह दिन्थे । किनभने रूपचन्द्र विष्टलाई फूल बोटैमा ओइलाएको मन पथ्र्यो । त्यतिबेला विष्टले पारिजातलाई थप भनेका थिए "तपाईंमा एउटा अपराधी प्रवृत्ति लुकेको छ; तपाईं परपीडक हुनुहुन्छ; यी फूलहरूलाई घाँटी निमोठ्तै ल्याएर आफ्ना वरिपरि सजाउनुहुन्छ । बोटमा नै ओइलिन दिए हुन्छ नि ।" फूलका प्रसङ्गमा पारिजातचाहिँ भन्थिन्( "फूल नै मेरो कमजोरी हो । म बसेको कोठामा फूल छैन भने त्यो ठाउँ नै मलाई बिरानो लाग्छ ।"
आफ्नो बाल्यकालमै पारिजातले आमालाई गुमाएकी थिइन् । त्यसैले आमाको प्रेम, माया र आत्मीयताका विषयमा यी अनभिज्ञ थिइन् । पारिजातले साँच्चै नै आफ्नो जीवनकालमा आमाको अनुभव गर्न पाइनन् । नारीको रूपमा जन्मेकी पारिजातले आफूले आफ्नी आमाको र आफूले नै भौतिक सन्तानकी आमा हुनुको अनुभूति सँगाल्न पनि पाइनन् । त्यसो त उनका मानस सन्तानको पर्याप्तताले गर्दा आफू आमा हुनुको अनुभूतिको छायाप्राप्ति भने उनले अवश्यै गरेकी थिइन् । यस सिलसिलामा पारिजातले भनेकी थिइन्( "मैले आमाको अनुभव गर्न पाइन“ । आमाको माया कस्तो हुन्छ त्यो
थाहा छैन ।" त्यसैले पारिजात बाबुको मात्रै संरक्षण र रेखदेखमा आबद्ध थिइन् ।
कामको विविध प्रपञ्चले गर्दा डा. के. एस्. लामा प्रायः सधै व्यस्त रहन्थे । पारिजात भने त्यसै अवस्थामा बाबुका आँखाहरूमा छारो हाल्न पुग्थिन् । त्यही परिणामले बाबुको आँखा छलेर यिनले सानैदेखि चुरोट खान सिकिन् । आफू छैटौ कक्षा पढ्न थालेदेखि नै यिनले राम्ररी चुरोट तान्न थालेकी थिइन् । आफ्नै फुपूकी छोरीसँगको सङ्गत र घोडचढी दाजुको आत्मीयताले गर्दा यिनले आफूलाई चुरोटमा बानी पारेकी थिइन् । यी क्रमशः यसैमा डुब्दै पनि गइन् । यतिसम्म कि भात खाइसकेपछि चुरोटको हरर तलतल लागेको यी प्रस्टै थाहा पाउँथिन् । उमेर बढ्दै जाँदा चुरोट त यिनलाई सामान्य लाग्न थाल्यो । त्यसपछि यी गाँजा खान पनि तल्लीन हुन थालिन् । यिनले त्यसैबेला गाँजा खाएर मुटुको ढुकढुकी पनि बढाएकी थिइन् । पारिजात गाँजा खाएरै बिरामी पनि भएकी थिइन् ।
सानैदेखि पारिजातको हातमा घरको भान्साको बागडोर परेको थियो । पारिजातलाई भान्सामा पकाउने ठूलो रहर थियो । त्यसैले उनी सहर्षत्यसबापतका कामहरू सम्हाल्थिन् । तर क्रमशः शारीरिक अवस्थाले गर्दा यी भान्साबाट पनि निष्कासित हुन थालिन् । यसै प्रसङ्गमा उनी भन्थिन्( "पाक मेरो रुचि थियो र त्यो मेरा बुबाको रहर पनि थियो । अझै पनि मैले पकाउन नपाउँदा मलाई दुक्ख लाग्ने गर्छ ।" आफ्ना किशोरवयमा जङ्गलमा पसेर स्याउला बटुल्ने, आगो बालेर आलु पोल्ने, चराहरू पोलेर खाने आदि मनोरञ्जनमा दिन बिताए पनि घरका प्रायः सबै काममा यिनले राम्ररी नै दलिनुपथ्र्यो । किनभने घरका सबैखाले काममा यी पोख्त थिइन् । वास्तवमा सानै उमेरकी भए पनि त्यस बेला आफ्नो घरकी मियो नै पारिजात थिइन् ।
पारिजातले प्रारम्भिक चरणमा दार्जिलिङकै क्रिस्चियन स्कुलमा पढिन् । ती स्कुलहरू थिए( 'नेपाली गर्ल्स हाईस्कुल' र 'सेन्ट टेरिजा स्कुल' । सेन्ट टेरिजा स्कुल क्रिस्चियनले सञ्चालन गरेकाले त्यस स्कुलमा जुनसुकै विद्यार्थीले पनि बाइबल पढ्नै पथ्र्यो । त्यसैले यिनले सानै उमेरमा 'बाइबल'का पाठहरूको अध्ययन गरेकी थिइन् । क्रिस्चियन स्कुलमा पढे पनि यिनले आफ्नो धर्मचाहिँ छाडिनन् । यी बौद्धधर्मावलम्बी थिइन् । यिनले पन्ध्र वर्षो उमेरमै बौर्द्धदर्शनका ग्रन्थहरू र गीता पढेकी थिइन् । साथै यिनले अन्य धार्मिक ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गरेकी थिइन् । त्यही स्कुलमा पढ्दापढ्दै यिनलाई स्काउटप्रति पनि चासो लाग्यो र यिनले गर्ल्स स्काउट हुने मौका पनि पाएकी थिइन् । पारिजातले प्रारम्भिक कक्षादेखि दस कक्षासम्म दार्जिलिङमा नै पढेकी थिइन् । उनी २०११ सालमा दार्जिलिङबाट काठमाडौं आइन् । काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेशपछि उनी एस्.एल्.सी. परीक्षाका लागि डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या विद्याश्रममा भर्ना भएकी थिइन् ।
पारिजात सानैदेखि गीत गाउनमा रुचि राख्थिन् । सानामा पारिजातको स्वर पनि राम्रो थियो । त्यसैले पारिजात सानैदेखि स्कुलमा होस् या घरमा होस्, सभामा होस् या वनभोजमा होस् गीत गाउन चाहन्थिन् । गीत गाएर उनले धेरैलाई लोभ्याएकी पनि थिइन् । तर यिनका बाबुलाई यिनले गीत गाएको पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले यिनको स्वर बिस्तारै खुम्चेर जान थाल्यो, हराएर जान थाल्यो र सेलाएर जान थाल्यो । सानामा नाच्न पनि यिनमा त्यत्तिकै सोख थियो तर बाबुका डरले यी यस बाटामा पनि औपचारिक रूपमा हिँड्न अर्समर्थ भइन् । सृजनात्मक रचनाहरू गर्न पनि यिनलाई त्यति नै रुचि थियो तर यिनले लेखेका लेखहरू यिनका बाबुका लागि असहृय हुन्थे । यिनलाई जनताका माझ र समाजमा नै पनि यी विविध रमाइला काम गर्न र लेख्न ज्यादै लोभ लाग्थ्यो । तर बाबुको डरले गर्दा पारिजात यस बाटामा प्रत्यक्ष खुल्न सक्तिनथिन् । लुकेर नै भए पनि यिनले गाउन छाडिनन्, नाच्न पनि छाडिनन् र लेख्न पनि छाडिनन् । आफू जिद्दी भएका कारणले नै यिनले आफ्ना रुचिहरूमा दिग्विजय प्राप्त गरेकी थिइन् । वास्तवमा उनी आफ्नै मनकी रानी पनि थिइन् । त्यसैले यसबारे उनी बराबर भन्थिन्( "बाबुसँग छलेर पनि म मेरा यात्रामा नै बगेँ । मेरा इच्छाहरूमा मैले नै जितेँ । घरबाट भने लेख्ने प्रेरणासम्म पनि मैले पाएकी थिइन“ । तर पनि मैले मेरा जीवनका उद्देश्यहरू त पूरा गरें नि !"
पारिजातलाई विज्ञान, अङ्ग्रेजी साहित्य र गणित पढाउने उनका बाबु डा. के. एस्. लामाको ठूलो धोको थियो । डा. लामा दिनरात एउटी छोरीलाई डाक्टर बनाउने कामना गर्थे । तर बाबुको चाहनामा पारिजात रत्तीभर चलेकी थिइनन् । यिनका बाबुको छोरीलाई प्राविधिक बनाउने दृष्टिकोणबाट मोडिएर यी स्वतन्त्र अध्ययनमा नै मन गर्थिन् । वास्तवमा यी आफ्ना कक्षाका पुस्तक पनि किन्दिनथिन् र मन दिएर पनि पढ्दिनथिन् । बरु अरू पुस्तकहरू पढ्दा नै यिनले स्वाद मेट्थिन् । आफ्ना बाबुको त्यस्तो कडा व्यवहारसँग सामना गरेर यी स्वतन्त्र नै भई छाडिन् । व्रि्रोह गरेर पनि यी स्वतन्त्र रूपमा बढ्न चाहन्थिन् । यसै विषयमा बाबुछोरीको ठयाकठयाक ठुकठुक परिरहन्थ्यो । यसबारे उनी भन्थिन्( "मेरो अटेरपनादेखि उहाँ (बुबा) लाई यातना हुन्थ्यो, उहाँको वाध्यतादेखि मलाई यातना हुन्थ्यो ।" त्यस बेला आफ्ना बाबुबाट यिनका गोडामा कति साङ्ला ठोकिन्थे, अनि कति काटिन्थे । तर उनी एकैनासले आफ्नै ढिपीमा आफ्नै बाटामा मात्रै हिँड्न खोज्थिन् । त्यसैअनुरूप पारिजात विशेषतः लेखनमा नै समर्पित हुन थालिन् र उनी यस उद्देश्यमा सफल पनि भइन् । यिनले लेखक बन्ने आफ्नो तीव्र इच्छालाई आफै साकार बनाइन् । आफ्नो दृढता, लगन र र्समर्पणका कारण उनी यस धर्तीकी सफल साहित्यकार बनिन् ।
दार्जिलिङको जीवनकालमा पारिजातले जति सुक्ख पाइन् दुक्ख पनि त्यति नै भोगिन् । आफ्नो मातृभूमिका विभिन्न मनोरञ्जन, प्रेम, सद्भावना, दुक्ख र सुक्खमा डुबुल्किँ दाडुबुल्किँदै यी २०११ साल मङ्सिरमा दाजु (काकाका छोरा) का साथ लागेर काठमाडौं
पसिन् । काठमाडौं आएर यिनले पढ्न थालिन् । त्यसै वर्षयिनले पद्मकन्या विद्याश्रमबाट एस्.एल्.सी. परीक्षा दिइन् र यी तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भइन् ।
काठमाडौंमा सुरुका दिनमा पारिजात र सुकन्या रामशाहपथमा डेरा गरी बसेका थिए । त्यस बेला यिनीहरू कहिले बानेश्वर, कहिले कीर्तिपुर अनि कहिले लगनटोलमा पनि डेरा सरेका थिए । जहाँजहाँ डेरा सरे पनि त्यहीँत्यहीँ मित्रहरूको जनसङ्ख्या बढाउने पारिजातको नैर्सर्गिक कला थियो । पारिजात असाद्धे मिलनसार थिइन् । पढ्ने क्रममा पनि यिनले थुप्रैलाई मित्र बनाइन् । आई.ए. पढ्न पद्मकन्या कलेज पुगेपछि दया सिंह यिनकी आत्मीयताकी डोरी बनिन् । मित्रताको डोरी कसिँदै जाँदा पारिजात दया सिंहकी माया, व्यथा र करुणाकी मूर्ति बनिन् । अथवा उनी पारिजातकी एउटा पथिक बनिन्, अनि उनी पारिजातकी एउटा पथ बनिन् । पारिजातका आ“सु जति पोखिन्थे ती सबै दया सिंहले देख्थिन् अनि पारिजातका खुसी जति हुन्थे ती सबै दया सिंहले नै पहिलोपल्टमा नै अथवा दोस्रोपल्टसम्ममा पक्कै देख्न पाउँथिन् ।
आई.ए. पढ्न पारिजात सुरुमा नेशनल कलेजमा भर्ना भएकी थिइन् । तर उनी त्यहाँ एक हप्ताजति मात्र गइन् र त्यसपछि पद्मकन्या कलेजमा यिनले आफ्नो नाउँ लेखाइन् । पद्मकन्या कलेजमा चाहिं यिनको मन पनि रत्तिएको थियो । त्यस कलेजमा पढेताका त्यहाँ उनी एक प्रकारले हिरोइनझै चम्केकी पनि थिइन् ।
पद्मकन्या कलेज पढेकाबेला यिनका मन पर्ने साथीहरूमा नमी राणा, भुवनेश्वरी थपलिया (पछि सत्याल), नारायणीदेवी चित्रकार (पछि मल्ल) पनि थपिएका थिए । भुवनेश्वरी थपलियाहरूले यिनको पढाइका सर्न्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका थिए । यसबारे पारिजातले भनेकी पनि थिइन्( "मलाई उनीहरूले कक्षँ का नोट दिएर पनि सहयोग गरे ।" साथीसँगिनी, बोलीचाली हरेक दृष्टिले उनी त्यहाँ चाँडै नै प्रायः र्सवपरिचित भइसकेकी थिइन् । कलेजका कार्यक्रममा उनी कत्थक नृत्य पनि गर्थिन् । त्यहाँ पढेताका उनी व्याडमिन्टन पनि खेल्थिन् । व्याडमिन्टन खेलेका बेला उनी हातको नारीमा रुमाल बान्ने गर्थिन् । त्यति बेलाको त्यो दृश्य हेर्न पनि रमाइलो हुन्थ्यो ।
पद्मकन्या कलेजमा अध्ययन गर्दा सुरुसुरुमा पारिजातले गाँजा पनि खाइन् । पारिजातका अनुसार यिनले पद्मकन्या कलेज पढ्दा त्यहाँका प्रायः विद्यार्थीहरू चुरोट खान्थे; तर मधु गिरी तथा देवलक्ष्मी भन्ने दुईजना विद्यार्थीहरूले भने चुरोट खाँ दैनथे । पारिजातकी असाध्यै मिल्ने साथी दया सिंहले पनि पारिजातको सङ्गत भेटेपछि चुरोट खान थालेकी रहिछन् । दया सिंहको सङ्गतपछि पारिजातले झन् एकान्तमा बसेर चुरोट तान्ने साथी पनि पाइन् । बाँचुन्जेलसम्म पारिजातले चुरोट खाई नै रहिन् । मानौँ , चुरोट यिनको एक प्रकारको अभिन्न साथी बनिसकेको थियो । किशोरावस्थामा उनी दार्जिलिङमा मटरमार चुरोट खान्थिन् भने काठमाडौंमा उनले खाने चुरोट 'गैंडा' (गैंडा चुरोट निस्केपछि) हुन्थ्यो ।
पारिजातले पद्मकन्या कलेजबाट २०१४ सालमा आई. ए. उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । पद्मकन्या कलेजको अध्ययनका क्रममा पारिजातको बेग्लै हाउभाउ थियो । आफू बी.ए.को दोस्रो वर्षी छात्रा भएका बेला यिनले हस्तरेखाको पनि अध्ययन गर्न थालेकी थिइन् । त्यस समयको चित्रात्मक घटनालाई अघि सार्दै उनी भन्थिन्- "म सारा कोर्स एकातिर थन्क्याएर हस्तरेखामा दत्तचित्त भएँ ।" हस्तरेखाको अध्ययनका समयमा पारिजातले ज्योतिष विद्याको गणित गर्दै आफ्ना साथीहरूको जन्मकुण्डली बनाएर र हात हेरेर व्यावहारिक सीप आर्जन गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । उनले आफू शिक्षिका भएका बेला पनि यो रीत कायम राखेकी थिइन् । तर पछि आफ्ना बाबुले यस विषयमा हात हाल्न कडाइका साथ निषेध गरेपछि उनी यस मार्गमा हिँड्न बन्द भएकी थिइन् ।
पारिजात नाटयकलामा पनि अभिरुचि लिन्थिन् । अध्ययनका बेला उनले केही नाटकमा अभिनयको भूमिका पनि खेलेकी थिइन् । यसै क्रममा गोविन्दबहादुर मल्ल 'गोठाले'को 'युगको शिकार'नामक नारीप्रधान नाटकमा पारिजातले नायिकाको सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । त्यस नाटकका निर्देशकचाहिँ श्यामदास वैष्णव थिए । पारिजातसँग त्यस नाटकमा खेल्ने अर्का साहित्यकार चित्तरञ्जन नेपाली थिए ।
पारिजातले पद्मकन्या कलेजमा पढेताका उनको कक्षामार् इश्वर बरालले अङ्ग्रेजी पढाउने गर्थे । पढाउँदापढाउँदै बरालले त्यस बेलाकी विष्णुकुमारी वाइबा अर्थात् भविष्यकी पारिजातमा भएको कस्तूरीको नाभिको बास्ना प्राप्त गरिसकेका थिए । बरालले मात्र होइन प्रायः सबै प्राध्यापकले उनको शिष्टाचारको बढाइँ गर्थे । उनी कलेजताकाको पढाइमा पनि राम्रो कसरत गर्थिन् । उनले २०१६सालमा सोही कलेजबाट बी. ए. पनि उत्तीर्ण गरिन् ।
अङ्ग्रेजी साहित्य लिएर पारिजातले एम्.ए. पनि पढिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअर्न्तर्गत एम्.ए. पढ्ने यिनको समूह पहिलो थियो । अर्थात् त्यस वर्षेखि मात्र नेपालमा एम्.ए. स्तरको पढाइ सञ्चालन हुन थालेको थियो । तर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी ललितपुरस्थित मदनमेमोरियल गर्ल्स हाईस्कुलमा पढाउन जान थालिन् । अनि स्कुलमा शिक्षिका भएपछि यी एम्.ए.का कक्षाहरूमा उपस्थित हुन सकिनन् । त्यसपछि पारिजातले औपचारिक हिसाबबाटै एम्.ए. पढ्न छाडेकी थिइन् ।
२०१७ साल फागुनदेखि पारिजातले मदन मेमोरियल गर्ल्स हाईस्कुलमा मासिक दुई सय रुपियाँमा काम गर्न थालिन् । त्यस स्कुलमा यिनलाई भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने वासुदेव शर्मा लुइँ टेल थिए भने भर्ना गर्ने व्यक्ति कमल दीक्षति थिए । उनी मदन मेमोरियल गर्ल्स हाईस्कुलमा दसौं कक्षामा अङ्ग्रेजी, भूगोल, नेपाली र भारतको इतिहास पढाउँथिन् । साथै उनी आफ्नो रुचि र विषयअनुसार सात र आठ कक्षाका विद्यार्थीलाई चित्रकला पनि सिकाउने गर्थिन् । त्यस स्कुलमा पारिजातले आफ्नो कला, सीप र जाँगर देखाउन पाइन् । स्कुलमा पनि यी प्रायः सबैकी प्रिय भइन् । उनी एउटी स्तरीय, कुशल र सक्षम गुरुआमा थिइन् । त्यतिमात्र होइन; उनले त्यस स्कुलमा प्रातःप्रार्थना का लागि गीत पनि लेखेकी थिइन् । यस विषयमा कमल दीक्षतिले लेखेका छन्- "उनले रचेका प्रार्थना गीत स्कुलका हाम्रा नानीहरूले सधै“ बिहान गाउँथे ।" विष्णुकुमारी वाइबाले स्कुलका लागि प्रार्थना गीत रचेपछि मात्र उनी पारिजात भएको कुरो मदन मेमोरियल स्कुलसँग सम्बन्धितहरूले पनि थाहा पाएका थिए । यसै प्रसङ्गमा सो स्कुलका तत्कालीन सक्रेटरी कमल दीक्षितको भनाइ छ- "बी. ए. पास भएकी विष्णुकुमारी वाइबालाई पाउनु स्कूलका लागि ठूलो कुरा भएको थियो त्यस बेला । विष्णुकुमारी वाइबा कवि पनि भन्ने कुरा स्कूलमा हामीले थाहा पायौ । उनले स्कूलमा प्रातः प्रार्थना लेखिदिएपछि ।"
स्कुलमा पढाउन थालेपछि पारिजातमा बिस्तारैबिस्तारै रोगको सशक्त आक्रमण हुन थाल्यो । आफ्नो शारीर कि स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन थालेपछि यी स्कुल जान पनि अर्समर्थ भइन् । त्यसैले २०१९ सालदेखि यिनले मदन मेमोरियल हाईस्कुलबाट अवकाश लिन खोजिन् । तर त्यति बेला त्यस स्कुलले उनको राजीनामा स्वीकारेन । उनी स्वस्थ भई पुनः स्कुल र्फकलिन् कि भन्ने आशामा उनको राजीनामालाई औपचारिकता दिइएको थिएन । यसको प्रमुख कारण उनीप्रतिको दया थिएन; उनी कुशल अङ्ग्रेजी शिक्षिका थिइन् ।
स्कुलबाट पारिजातको राजीनामा स्वीकृत नभएकाले २०२२ सालमा उनले सो स्कुललाई फेरि अर्को कडा चिठी लेखिन् "मेरो राजीनामा तपाईंहरूले किन स्वीकार नगरेको ? " त्यसपछि चाहिँ उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । वास्तवमा गम्भीर शारीरिक अवस्थाका कारण उनी त्यो स्कुल छोड्न बाध्य भएकी थिइन् । त्यस बेला पैदा भएको त्यो बिरामीले उनलाई जीवनपर्यन्त झन्झनै रोगी बनाउनेछ भन्ने कुरा त्यस बेला स्वयं पारिजातलाई पनि त्यतिको थाहा थिएन ।
पारिजातलाई बाथले कक्राककुक्रुक पार्न थालिसकेको थियो । उनका हातखुट्टाका जोर्नी खपी नसक्नु दुख्न थाले । त्यति बेला उनको उपचार्रार्थ कमल दीक्षित पनि खटेका थिए । यस विषयमा दीक्षितले लेखेका छन्( "बाथको रोगीलाई स्यालको मासु खायो भने फाइदा हुन्छ भन्ने र एउटा स्याल मारिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध मलाई (मदन मेमोरिल) स्कूलबाट आयो । तिनताका श्रीदरबार जङ्गलजस्तै थियो र दिउँसै पनि त्यहाँ स्यालहरू कुदिरहन्थे ।... मैले मेरो टुटु बन्दुकले एउटा स्याल मारेर छाला काढ्न लगाई त्यसका चारवटा सपेटा स्कूलमा पारिजातका लागि पठाइदिएको थिएँ । तर स्यालको मासुले पनि उनलाई केही फाइदा भएन ।" अनि त्यसै वर्षेखि जीवनमा कहिल्यै निको नहुने गरी बाथ (Rheumatoid arthritis)का कारणबाट पारिजात थला परिन् । यसै प्रसङ्गलाई लिएर पारिजातले लेखेकी थिइन्- "झन्डै उन्नाइसबीस सालदेखि म बाथको रोगले कुजिएँ । दुई वर्षम्म खाटमा सीमित भएँ । त्यसैताका मैले एउटा उपन्यास सिध्याएँ 'शिरीषको फूल'।यसको भूमिका मैले मलाई आफ्नो सबैभन्दा मन परेको लेखकद्वारा लेखाउनु थियो र त्यस धोकोलाई मैले सफलतासाथ पूरा गरेँ ।" वास्तवमा शङ्कर लामिछानेले 'शिरीषको फूल' भित्र एउटा अभूतपूर्व भूमिकाको रचना गरेका थिए ।
पारिजातको औषधी उपचारका हेतु सिद्धिचरण श्रेष्ठ र दान खालिङले उनलाई राजा महेन्द्र (म. वी. वि. शाह) का नाउँमा बिन्तीपत्र लेख्न आग्रह गर्दै भनेका थिए- "एउटा बिन्तीपत्र हाल्नुस् बैनी !तपाईंका निम्ति जे पनि हुन सक्छ ।" त्यस बेला दान खालिङले चाहिँ पारिजातलाई राजा महेन्द्रको महानताका बारे धेरै बुझाएका थिए । अनि पारिजातले प्रत्युत्तरका क्रममा भनेकी थिइन् -"त्यसरी सुटुक्कै दरखास्त हाल्न मेरो मन राजी हुँदैन; यो काम मलाई मीठो कुरा एक्लै खाएजस्तै लाग्छ ।" यस प्रसङ्गमा पारिजातले लेखिन् पनि-"धेरै बेरको बहसपछि उनीहरू मलाई बिन्तीपत्र लेख्न राजी गराएरै छोड्छन् । बिन्तीपत्र उनीहरूले नै तयार पार्छन् म हस्ताक्षर गर्छु केही समयपछि नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट एउटा चिठी आउँछ । चिठीमा जुन अस्पतालमा गएर पनि रोगको अनुसन्धान गराउन पाउने सङ्केत थियो । शान्तभवनका डा. मिलरले यस पत्रको अपहेलना गरिदिए । त्यसको केही दिनपछि अर्को पत्र सोझै राजदरबारबाट आउँछ; जसमा रोगको अनुसन्धान गरी अथवा कति खर्चले ठीक हुन्छ पत्तो लगाउनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो ।" त्यसघडी यस कामका लागि पारिजातले धेरै दौडधूप पनि गरिन्, तर नोकरशाहहरूको एक इन्च पनि सहयोग पाइनन् । पारिजातले त्यतिबेला पनि आफ्नो स्वाभिमान ढलेको ठानिन् । साँच्चै भन्ने हो भने राजा महेन्द्रले चिने पनि उनलाई कर्मचारीले चिनेनन् ।
२०४६ सालको आरम्भतिरको कुरा हो; पारिजातको औषधी उपचार गर्नेबारे पारिजातसमक्ष थप प्रस्ताव नरेन्द्रराज प्रर्साईले पनि राखेका थिए । त्यति बेला प्रर्साईले पारिजातलाई भनेका थिए "दिदी !हजुरले हुन्छ मात्रै भन्नु, दिदीलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर औषधीउपचार गर्ने विषयमा रानी ऐर्श्वर्य (कवयित्री चाँदनी शाह) मार्फत म समर्पित हुन्छु । दिदीको स्वास्थ्य ठीक भएमा नेपाली भाषासाहित्यका लागि थप अर्को उपलब्धि हुन्छ ।" तर पारिजातले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । वास्तवमा स्वाभिमानलाई शिरमा बोकेर हिँड्नुपर्दा उनले आफ्नो रोगलाई पनि सधैं शरीरमा बोकेरै हिँड्नुपर्यो । सी. के. प्रर्साईका शब्दमा भन्ने हो भने "पारिजातले जीवनभर रोग एवम् शैयाग्रस्त हुँदा पनि केवल दिनुभयो; कसैबाट केही लिनुभएन ।"
पारिजातलाई नेपालको नागरिकता लिने साहै्र ठूलो इच्छा थियो । त्यसैले उनी नागरिकता लिन ठाउँठाउँमा पनि धाइन् । तर उनले नेपाली नागरिकता पाइनन् । उनले यस विषयमा पनि अत्यन्तै विहृवलित हुँदै लेखिन्- "कति ठाउँबाट भौ“तारिएर नोकरशाह अधिकृतहरूको ढोकाबाट भकुन्डो खेलाइ सहेर हिँड्दा पनि मैले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकिन“ ।"
पारिजात आफ्ना अभिन्न मित्र भूपी शेरचनका माध्यमबाट वामपन्थी नेता निर्मल लामासँग घनिष्ठ हुन पुगेकी थिइन् । निर्मल लामाको पारिजातसँग ज्यादै घनिष्ठता बढेपछि पारिजातकी बहिनी
(नाउँ अज्ञात) सँग निर्मल लामाका भाइ सचिनको बिहे भयो । त्यसपछि सुकन्यासँग निर्मल लामाको पनि वैवाहिक जीवन बाँधियो । निर्मल लामा र सुकन्याको जोडी बाँधिएपछि क्रमशः पारिजातमा प्रसन्नताको वृद्धि भइरहेको पाइन्थ्यो । त्यसपछि बिस्तारै पारिजातले निर्मल लामालाई गडफादर भनेका प्रसङ्गहरूसमेत पनि प्रकाशनमा आए ।
शारीरिक अस्वस्थताले दुक्ख दिए तापनि मानसिक रूपमा पारिजात सम्पन्नतामा हुर्कि रहेकी थिइन् । यसैबीच फेरि पनि पारिजातको शिरमा अर्को चट्याङ बज्रन पुग्यो । भनूँ , पारिजात र सुकन्याका जीवनमा फेरि अर्को आकाश खसेको थियो । अर्थात् २०२९ सालमा पारिजातका बाबु डा. के.एस्. लामाको निधन भएको थियो ।
पारिजातको घर काठमाडौको म्हैपीमा २०३२ सालमा निर्माण भएको थियो । पारिजातकी बहिनी सुकन्या फोर्ड फाउन्डेशनमा काम गर्थिन् । त्यहाँबाट प्राप्त रकम जोडेर त्यहाँ एउटा सामान्य अथवा अझै भनूँ अत्यन्तै सामान्य घर बनाइएको थियो । त्यस निवासमा साहित्यिक जमघटहरू भइरहन्थे, त्यस निवासमा कलाकारहरू उपस्थित भइरहन्थे र त्यस निवासमा साहित्यानुरागीहरूको भिड लागिरहने गथ्र्यो । त्यहाँ कहिले साहित्यगोष्ठी हुन्थे, कहिले गीतगायन
कार्यक्रम हुन्थे र कहिले स्रष्टाहरूमाझमा परिचयात्मक कार्यक्रम हुने गर्थे । पारिजातका समकालीन साथीहरू भन्छन्( त्यस बेलाको म्हैपी नेपाली कला र साहित्यको मनोरम, चमकदार र अनुरागी ठाउँ थियो ।
पारिजातलाई २०२१ सालदेखि बाथ रोगले क्रमशः पीडा दिन थाल्यो । दिन बित्तै जाँदा उनको रोगले उनलाई अत्यन्तै दुक्ख दिन थाल्यो । कहीँ कतै गए पनि त्यस रोगको उपचार हुन नसक्ने सङ्केत त्यसै बेला भइसकेको थियो । सास भइन्जेल आस हुन्छ भन्ने अभ्रि्रायले गोविन्द भट्टले मीनभवनमा बस्ने चीनियाँ एकुपन्चर डाक्टरकहाँ पनि पारिजातलाई पुर्याए । त्यस बेला चीनियाँ डाक्टरले भनेका थिए "क्रोनिक भएछ ।" र्यूमोटोइड आथ्राइटिस भन्ने रोगले बेस्सरी च्याप्न थालेपछि यी वेदनामा चुर्लुम्मै डुब्न थालिन् । त्यसै बेलादेखि पारिजात जीवनभरका लागि ओछयान लागिन् । त्यसपछि उनलाई अल्सरले पनि दुक्ख दिइरहृयो । यसरी बैसको कल्कलाउँदो र भर्भराउँदो जिन्दगीमै उनले बाँचुन्जेल कुँजिने रोगको सिकार हुनुपरेको दुखद सूचना आफ्नै शरीरमार्फत पाएकी थिइन् ।
पारिजातको जीवनमा राल्फाको पनि ठूलो प्रभाव पर्यो । राल्फामा लागेर उनले धेरै पाइन् र केही गुमाइन् । त्यति बेला पनि यौनपिपासुदेखिर् इष्र्या गर्नेसम्मले उनका शरीर र व्यक्तित्वमा पनि आ“खा गाडे । त्यस घडी उनी प्रायः बघिनी हुन्थिन् त कहिलेकाहीँ बिरालाले खेलाउन खोजेको मुसो पनि बन्नुपर्ने बाध्यतामा गाँसिन्थिन् । त्यसबेला पनि यिनले धूमधाम निराशाका दिनहरू खेप्नुपरेको थियो ।
आफ्ना विभिन्न व्यथालाई ढाक्न, छोप्न र रोक्न उनी बिजुली र्सबतमा पनि निर्धक्क डुब्न थालेकी थिइन् । चुरोटपछि रक्सी
उनको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी भइसकेको थियो । यसै सिलसिलामा एक दिनको बिजुली र्सबतको प्रसङ्गबाट रामेश श्रेष्ठ लेख्छन्- "नसाभित्र हुनुहुन्थ्यो दिदी । मैले माया र आदरले नपिउन अनुरोध गरे । नभन रामेश म अति व्यस्त छु । रामेश !म थाक्छु, अति नै थाक्छु । मेरो यो सानो रिल्याक्स !थकाइ र पीडा बिर्सने बहाना ! अलिकति मनोरञ्जन........!"
मान्छेका लागि बाँच्ने कुरा नै प्यारो लाग्छ । बाँच्नका लागि भनेर पारिजातको उपचार, औषधि र सेवा बराबर भइरहेको थियो । कैयौ“पल्टको उपचारप्रयास पनि उनको जीवनका लागि सफल हुन सकेन । साढे तीन दशकसम्म निरन्तर शरीर दुख्तादुख्तै यस पृथ्वीबाट उनको भौतिक शरीर एकाएक विलीन भयो ।
पारिजातले यो चमत्कारी संसारबाट घरीघरी बिदा लिन खोजेकी थिइन्; अनि साँच्चै नै काठमाडौ“को वीर अस्पतालबाट २०५० सालको वैशाख ५ गते एकाबिहानै सबैसँग सधै“का लागि बिदा मागेर उनी स्वर्गीय भइन् । उनको इच्छा थियो- "मेरो शरीरलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नराख्नू ।" उनको पार्थिव शरीर टुडिखेलमा राखियो । त्यहाँ उनको अन्तिम दर्शनका लागि मान्छेहरूको ओइरो लाग्यो । पारिजातको पूर्वइच्छाबमोजिम उनको पार्थिव शरीरमा हरियो रङ्गको सारी लगाइएको थियो भने रातो रङ्गको पछयौरी ओढाइएको थियो । उनकै इच्छाअनुसार उनको शव आठ जना महिलाहरूद्वारा उठाइएको थियो । त्यसपछि अन्त्येष्टिका लागि उनको भौतिक चोला उनकै जातीय संस्कारअनुसार उनको निवासस्थान म्हैपी हुँदै स्वयम्भूको सानो जङ्गलमा पु-याइयो र उनको भौतिक शरीर त्यहीँ जलाइयो । पारिजातको निधनले एकपल्ट नेपाल नै हल्लियो । नेपाली साहित्यकी सुगन्ध पारिजातको स्वर्गारोहणले नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण फाँट नै गहिरो शोकमा डुब्यो । त्यसपछि पारिजात एउटा राजनैतिक खेमाकी मात्र सम्पत्ति नभएर समस्त नेपाली भाषा र साहित्यकै साझा सम्पत्ति बनिन् । प्रतिक्रिया पठाउनुस्
भाषासाहित्यकार पारिजात भानुभक्त आचार्यले याहाँ तपाईको जिबनि जीवनी : Life Story भाषासाहित्यकार पारिजात पारिजातका भनाइमा "कञ्चनजङ्घाका चिसा सासहरूले म्वाइँ खाएको पहाड दार्जिलीङ हो ।" भारतको पश्चिमबङ्गालस्थित दार्जिलिङमा पारिजातको जन्म भएको थियो । त्यहीँको लिङ्गिया चियाकमानमा संवत् १९९४ (सन् १९३७) सालको वैशाखमा (अनुमानित) पारिजात अरु बाकी भानुभक्त आचार्यले भानुभक्त एक बहुमुखि प्रतिभा